Infographic: tantara fohy momba ny dokam-barotra sosialy | Martech Zone
Raha maro ny media sosialy manadio ny hery sy ny tanjaky ny organika media marketing sosialy, mbola tambajotra sarotra hita raha tsy misy fisondrotana. Ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy dia tsena iray izay tsy nisy vao folo taona lasa izay fa nahazo $ 11 miliara amin'ny fidiram-bola tamin'ny taona 2017. Niakatra 6.1 miliara dolara fotsiny izany tamin'ny 2013.
Ny doka ara-tsosialy dia manolotra fotoana hananganana fahatsiarovan-tena, lasibatra miorina amin'ny angona geografika, demografika ary fitondran-tena. Ary koa, maro amin'ireo doka no azo apetraka mifanila amin'ny lohahevitra mifandraika amin'izany. Betsaka amin'ireo sehatra no manolotra fahafaham-barotra ho an'ireo mpitsidika nandao ny tranokalanao na ny fiantsenana ary niverina tany amin'ny fiaraha-monina.
Tsy foana aho mpankafy ny doka media sosialy, na izany aza. Ny fisalasalako amin'ny dokambarotra media sosialy no tanjon'ny mpampiasa media sosialy. Raha ao anaty vondrona sosialy kendrena izay itovizan'ny fahalianana amin'ny doka, dia afaka mamokatra vokatra be. Na izany aza, raha ny tanjon'ny mpampiasa dia ny mandeha mitsidika ny fianakaviany sy ny namany ary mijanona eo anelanelan'ny… ianao dia mety tsy hahazo ny valiny ilainao hanohanana fampielezan-kevitra mitohy.
Singa iray manan-danja amin'ny dokam-barotra amin'ny media sosialy koa ny fiantohana ny rohy ataonao miaraka amin'ny angona fampielezana. Koa satria ny ankamaroan'ny mpampiasa media sosialy dia mampiasa fampiharana, maro amin'ireo mpitsidika ireo no afaka miseho ho fitsidihana mivantana ao aminao Analytics sehatra satria tsy miala ireo rindranasa loharanom-baovao rehefa tsindrio ny rohy ary misokatra ho azy ny browser.
Unified dia namorona an'ity sary ity mba hanehoana ny fivoaran'ny sehatra fanaovana dokambarotra sosialy. Ny Unified dia vahaolana farany maharitra ho an'ny hevi-baovao ateraky ny angona, fanatsarana ny fahana ara-tsosialy amin'ny fotoana tena ary dokam-barotra fandaharana amin'ny tambajotra sosialy lehibe rehetra amin'ny sehatra tokana.
Tags: emarketerFacebookfidiram-bolan'ny facebookdoka facebook apidoka finday facebooktantara notohanan'ny facebookefa-joro sokeraLinkedInfidiram-bola adiresydoka mifandraika apivola miditra amin'ny doka ara-tsosialydoka ara-tsosialyfandaniana doka ara-tsosialyhaino aman-jery sosialyfampahalalam-baovao sosialyStumbleUponTumblrTwitterfidiram-bolan'ny doka twitterdoka twitter apidokambarotra twitter mpiara-miasafidiram-bola amin'ny finday twitterseraseraYouTube
Dec 23, 2016 amin'ny 7: 01 AM
Salama misaotra amin'ny infografika mahaliana. Izaho manokana dia nanomboka tamin'ny Internet tamin'ny 1998 talohan'ny nieritreretana ny media sosialy ary jereo izao ny fitomboana! dia lasa adala 🙂 misaotra
13 Aogositra 2021 à 1:00
Ny infografika mahafinaritra ary tamin'ny tarehimarika 2021 dia nametraka ny isan'ny olona mampiasa media sosialy amin'izao fotoana izao amin'ny 3.95 lavitrisa izay mahagaga. Toa eto ny haino aman-jery sosialy hijanona ho amin'ny hoavy.